Accueil > Gazetin'ny nosy > Marc Ravalomanana : Fanompana an-dRajoelina no heveriny fa handreseny
Marc Ravalomanana : Fanompana an-dRajoelina no heveriny fa handreseny
Ny fitenin’ingahy Ravalomanana Marc tao amin’ny onjam-peo iray eto Antananarivo tamin’ny voalohandohan’ity herinandro ity dia tena resaka mirefarefa amin’ny tany tanteraka. Tsy nisy zavatra nolazain’ity filoham-pirenena teo aloha ity raha tsy fanaratsiana an’ingahy Andry Nirina Rajoelina fotsiny. Azo adika ho teny ratsy tanteraka ny zavatra sasantsasany tamin’izany. Tsikaritra tamin’ny fomba fiteniny koa fa olona tena vonona ny hamaly faty tanteraka no ao an-tsainy. Valifaty hita fa ho diso fiantefa izany satria fankahalana ihany no fototra.
Araka ny fomba fanaon’ingahy Ravalomanana Marc ireny dia teny fanivaivana olona no nanambarany ny fahitany ny zavatra nitranga teto tamin’ny fanonganan’ny vahoaka azy tamin’ny taona 2009 izay niantsoan’ny olona an’ingahy Andry Nirina Rajoelina hitarika izany fanonganana izany.
Raha nandinika sy mijery amin’ny fomba tony sy milamina ary fitiavan-tanindrazana ny zava-misy tamin’iny fotoana iny ingahy Ravalomanana Marc dia tsy tokony hanao ireny fitenenana tamin’ny onjam-peo ireo ary hisaotra an’ingahy Andry Rajoelina tanteraka aza. Hadinony fa tolom-bahoaka iny toe-draharaha iny. Noho izany dia tsy tokony ho Andry Nirina Rajoelina velively no ho haratsiany sy hompainy amin’izany fa ny vahoaka Malagasy izay tsy nankasitraka intsony ny fitondrana jadona tamin’ireny fotoana ireny. Iza moa no tsy nahalala teto amin’ity tany ity fa nanodinkodina volam-bahoaka aman-tapitrisany maro tamin’ny banky foibe maro manerana ny nosy izy. Tsy izany ihany fa tena zava-doza teto amin’ny firenena ny fivarotany ny tany tamin’ny orinasa koreanina tatsimo Dawoo Corporation tany amin’ny faritra avaratra manontolo iny. Maro ny tany namidiny tamin’izany eran’i Madagasikara. Mbola tsy hadinon’ny olona koa ny mahakasika ny valabe tao Ankaramena tao Ambalavao izay hanondranana ny omby gasy tany an-dafy ka nahatonga ny halatr’omby lehibe nataon’ny andian’dahalo maro aman-jatony tany amin’ny faritra atsimo iny. Nanomboka teo ny asan-dahalo niala tamin’ny fomban-drazana Malagasy, ka izao mbola manaranaka hatramin’izao fitondrana izao.
Ity resaka fivarotana tany sy halatra omby ity no tena tsy tantin’ny Malagasy tamin’ingahy Ravalomanana Marc ka nampiongana azy tamin’ny taona 2009 ka nandosirany nanaovany sesitany ny tenany tany Afrika Atsimo. Hadinon’ingahy Ravalomanana Marc koa fa olona 1882 no nogadrainy tsy amin’ntony teto Madagasikara ny taona 2001-2003. Ny fananganany ilay zanadambo izay miaramila milisy namono olona maro teto Madagasikara tamin’izany andro izany. Olona aman’aliny maro no nitondra faisana tamin’izany, ka mbola tsy manadino satria be dia be loatra ny olona maty sy nitondra takaitra tamin’izany. Ingahy Ravalomanana Marc dia niaraha-mahalala fa nanapotika ny orinasa teto Madagasikara rehetra tsy ankanavaka ankoatra ny Tiko sy ny Magro.
Mbola maro no manana antontan-taratasy mahakasika an’ingahy Ravalomanana Marc eto Madagasikara ankoatra ny efa any ampelatanan’ny fanjakana.
Tsy maintsy naverina kely ireo voalaza eo ambony ireo satria tsy ny fanaratsiana sy ny fanompana an’i Andry Nirina Rajoelina amin’ny haino aman-jery no heveriny fa hifidianan’ny Malagasy azy ary handreseny amin’ny fihodinana faharoa izao. Miandry ny fifonany tamin’ny ratsy nataony tamin’izy nitondra ireny ny Malagasy no miandrandra fihavanana sy fifankatiavana, fahatoniana satria hita fa fihetsika mihantsy ady ireny nataony ireny ka tsy mendrika ny olona hitondra firenena intsony.
Aza adinoana fa ny tolona notarihin’ingahy Andry Rajoelina ny taona 2009 dia noho ny fitakiam-bahoaka sy ny fanirian’ny Malagasy tamin’izany fotoana izany. Zava-doza tokoa no niseho teto raha toa ka tsy rava iny fanjakan’ingahy Ravalomanana ny taona 2001-2009 iny.